Fox's Animation Throwdown နှင့်အတူလူမိုက်အများဆုံးကစားကဒ်ဖြစ်သည် Androidsis
Animation Throwdown သည် Fox တွင်နာမည်အကြီးဆုံးသောကစားကွင်းများကိုကစားနိုင်သည့်ကစားသမားဖြစ်သည်
Manuel Ramirez | | Android ဂိမ်းများ, လဲ tutorial
Fox ကရှိပါတယ် ရယ်စရာအကောင်းဆုံးစီးရီးအချို့ အားလုံးသောအချိန်ကာလနှင့်မိသားစုတွင် Guy Guy၊ Futurama၊ American Dad၊ the King of the Hill သို့မဟုတ် Bob's Burgers တို့ကိုသာရေတွက်နိုင်သည်။ ပျော်စရာကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွဲတွေအားလုံးပါ ၀ င်ပြီးငါတို့သိတဲ့ဇာတ်ကောင်များနှင့်အခြားကဒ်ဂိမ်းများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးကျယ်တဲ့ Hearthstone ကိုမှတ်မိပြီး၊ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စကြာ ၀ upာကိုတည်ဆောက်သည်။ Kongregate သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ Futurama ကဲ့သို့လေထုထဲတွင်မရှိတော့သောစီးရီးများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ဥာဏ်ကောင်းများကိုဆောင်ကျဉ်းပေးမည့်ဂိမ်းအကြောင်းပြောနိုင်သည့်တရားခံဖြစ်သည်။ ငါတို့၏ထုတ်ဝေခဲ့သည့်၏ အလွန်ပျော်စရာနှင့်ပေါ့ပေါ့တ ဦး တည်း.
Animation Throwdown သည်ထိုအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အားပို့ဆောင်ပေးသည် ငါးစီးရီး၏ကာတွန်းဇာတ်ကောင် ကျွန်ုပ်တို့သည် Android ဖုန်းမှအပျော်တမ်းအဝတ်အထည်များ၊ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းရုပ်မြင်သံကြားမှအရူးအမူးစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောဇာတ်လမ်းများပေါ်ပေါက်စေသည့်အမျိုးမျိုးသောဖုံးအုပ်ထားသည့်အဓိကဇာတ်ကောင်များအနေဖြင့်ဤဇာတ်လမ်းတွဲများတွင်ပရိသတ်များအနေဖြင့် Stewier, Bender, Hank Hill သို့မဟုတ် Roger ဂြိုလ်သားကဲ့သို့သောဇာတ်ကောင်များရှိလိမ့်မည်။ Animation Throwdown ဖြင့် Android ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် Hearthstone card game တွင်ထူးခြားသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ကတ်အားလုံးကိုစုဆောင်းရန်လိုအပ်သည့်နက်နက်နဲနဲမဟုတ်ပါ။
1 စီးရီး၏ 25 ဖြစ်စဉ်များ
2 အလွန်ပျော်စရာများနှင့်စိန်ခေါ်မှု multiplayer အတူ
စီးရီး၏ 25 ဖြစ်စဉ်များ
Animation Throwdown မှာနောက်ခံအနေနဲ့ပါ အချိန်လေးနှင့်တည်နေရာနှင့်အတူ 25 အခန်းကြီး သင်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ရပ်များအကြောင်း, ဒါကြောင့် အကယ်၍ သင်သည် Family Guy (သို့) Futurama ကိုစွဲစွဲမြဲမြဲနှစ်သက်တဲ့ပရိသတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်၊ အချိန်တိုအတွင်းမှာပင်ယင်း၏ဇတ်ကောင်များမှအချို့သောသရုပ်ဆောင်ထားသောအရူးနှင့်မုန်းတီးသောပုံပြင်များအတွက်နေ့စဉ်မြင်ကွင်းများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဒီဗီဒီယိုဂိမ်းကိုသွား ပိုပြီး hooligan နှင့် carefree ခြမ်း ဒီဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာကောင်းတဲ့မှတ်ချက်တွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ရင်သင်အံ့သြသင့်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲငါးခုထဲကတစ်ခုကိုစိတ် ၀ င်စားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လို့ပါ။
မင်းလုပ်ရလိမ့်မယ် စုဆောင်းတိုးတက်အောင်နှင့်ပေါင်းစည်း သင့်အတွက်အလွန်ခက်ခဲသောအရာများကိုအက္ခရာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရန်ကဒ်များ။ ဆိုလိုသည်မှာကဒ်တစ်ခုစီသည်တန်ဖိုးနှစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ တစ်ခုမှာတိုက်ခိုက်ရန်အတွက်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာကာကွယ်ရေးအတွက်ဖြစ်သည်။ သင်ကဒ်များကိုပေါင်းစည်းနိုင်ခြင်းကြောင့်ပေါင်းစပ်မှုကပိုမိုထိရောက်သောအကျိုးရလဒ်ကိုရရှိစေပြီး Stewei ကိုသူကိုယ်တိုင်ဇောက်ထိုးလှည့်နိုင်သည်။
အလွန်ပျော်စရာများနှင့်စိန်ခေါ်မှု multiplayer အတူ
ဒီကဒ်အားလုံးကို Family Guy, Bob's Burgers, Futurama, American Dad နှင့် the King of the Hill တို့မှရယ်စရာအကောင်းဆုံးဇာတ်ကောင်များမှစုဆောင်းနိုင်သည်။ ဂိမ်းသည်ဤဇာတ်ကောင်များစွာနှင့်မတူညီသောဗားရှင်းများကိုလည်းပေးထားသည် ကွဲပြားခြားနားသောကျွမ်းကျင်မှု နှင့်စာရင်းအင်းများ။
ဘယ်မှာသင်အများဆုံးတွေ့ရလိမ့်မည်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးတွေ့လိမ့်မည်ပေမယ့် အဆိုပါ multiplayer ဒါကသင့်ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကအခြားကစားသမားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့ခွင့်ပြုမှာပါ။ ဤတွင်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကဒ်များလိုအပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အခြားကဒ်ဂိမ်းများကဲ့သို့သင်ကစားသမားတစ် ဦး တည်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကိုသော့ဖွင့ ်၍ စုဆောင်းရန်လိုလိမ့်မည်၊
Animation ဖြုတ်ချခြင်းကိုတွေ့ပြီ Google Play စတိုးမှအခမဲ့ဖြစ်သည် သိသာ micropayments နှင့်စွမ်းအင်နှင့်အတူ။ စွမ်းအင်စနစ်သည်သင်ကစားနိုင်သည့်ဂိမ်းအချိန်ကိုကန့်သတ်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။ ဒေသတွင်းဖြန့်ချိပြီးတဲ့နောက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွေရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာလူကြိုက်များတဲ့ဗွီဒီယိုဂိမ်းတခုခုရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့မိုဘိုင်းမှာဒီအရူးဇာတ်ကောင်တွေအားလုံးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲဒါဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။
သယ်ဆောင်သည် သူတို့အားစီးရီးအပေါငျးတို့သဝိညာဉျကို hooligan နှင့် carefree animation ဇာတ်ကောင်အများဆုံးပါဝင်သဖြင့်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းနိုင်သည့်အတွက်ကတ်များကိုကောင်းမွန်စွာကစားသည်။ Futurama ကဲ့သို့သောစီးရီးအချို့ကိုနှစ်သက်သူများအတွက်အထူးခံစားရမည့်ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခု။ ကဒ်များသည်သင်၏အရာဖြစ်ပြီးသင် Bender နှင့်သူ၏အထူးမှတ်ချက်များအတွက်သင်သေနေမည်ဆိုလျှင်၎င်းကိုချက်ချင်းထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
animation ရဲ့ Throwdown
Multiplayer mode ကို
Animation ရဲ့ Throwdown: TQFC
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Animation Throwdown သည် Fox တွင်နာမည်အကြီးဆုံးသောကစားကွင်းများကိုကစားနိုင်သည့်ကစားသမားဖြစ်သည်
Tutatis! ယခု Asterix နှင့်သူငယ်ချင်းများအတွက်ထိုအပြစ်တင်ခံထားရသောရောမများအားတိုက်ခိုက်ပါ
LeEco Le Pro3သည်စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင်ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့်ရောက်ရှိမည်